Madaxweyne Reccep Erdogan oo ka soo hor-jeestay is-casilaadda wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga | HalQaran.com
Home Caalamka Madaxweyne Reccep Erdogan oo ka soo hor-jeestay is-casilaadda wasiirka arrimaha gudaha ee...
Madaxweyne Reccep Erdogan oo ka soo hor-jeestay is-casilaadda wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga
Ankara (Halqaran.com) – Madaxweynaha dalka Turkey, Reccep Tayyip Erdogan ayaa Axaddii diiday inuu aqbalo is-casilaadda wasiirkiisa arrimaha gudaha oo ka dhalatay xanibaad deg deg ah oo dalka lagu soo rogay taasi oo hogaamisay in dadku ku cararaan dukaamada ayagoo argagaxsan.
Wasiir Suleyman Soylu ayaa la kulmay cambaareyn xooggan kadib markii bandow 48 saac ah oo looga hortagayo faafitaanka cudurka Coronavirus lagu dhawaaqay Jimcihii, ayada oo shacabka la siiyey kaliya ogeysiis laba saac ah.
Isaga oo ka jawaabaya jahwareerka arrintan ka dhashay, ayaa Soylu waxa uu sheegay in go’aanka lagu joojiyey dhaq-dhaqaaqa dadka uu “amray” madaxweynaha.
Ugu dambeyn, kadib jahwareerkii hore ee ka dhashay xanibaadda ayaa dhaqan-gashay, waxaana u hogaansamay inta badan shacabka.
Madaxweyne Reccep Erdogan oo ka soo hor-jeestay is-casilaadda
wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga